Izindawo zeGoogle> Amakhasi weGoogle Plus (Okwamanje) | IMarTech Blog
Izindawo ze-Google namakhasi we-Google Plus webhizinisi (Okwamanje)
NgoMsombuluko, Novemba 14, 2011 NgoMsombuluko, Okthoba 26, 2020 UKevin Mullett
Lokhu ngeke kube okunye okuthunyelwe okukukhuthaza ukuthi uhambe usethe i- Ikhasi le-Google Plus lebhizinisi ngokushesha, futhi ngeke ikunikeze iziyalezo zendlela yokwenza kanjalo. Kuyavunywa, yilokho ebenginethemba lokukuphakamisa lapho kukhishwa i-Google +, futhi ngaphandle kokulungiselela i-webinar ukwenza lokho, kufanele nginikeze enye indlela… okwamanje.
Kungani ungavele ungene ngaphakathi? Nokho, ngenkathi kufanele sivumele iqiniso lokuthi i-Google + Amakhasi asemasha sha, ziye zavela ezindaweni eziningi ezibalulekile. Nazi ezimbalwa nje:
Akuveli ukuthi kukhona noma yikuphi ukuvikelwa endaweni yokuvimbela umuntu ukuthi adale ikhasi elinegama lebhizinisi lakho.
kuphela umphathi oyedwa ekhasini ngalinye kuvunyelwe, futhi alukho uhlelo lokudlulisa olukhona njengamanje. Ngamanye amagama, uma ngishiya iCirrus ABS, angikwazi ukukhipha ukulawula kwami ​​ekhasini elinophawu lweCirrus ABS (noma iGoogle ithi isebenza kule nkinga).
Kuphikisana ne-TOS ukuya dala ama-akhawunti mbumbulu, ngakho-ke, ukukhuluma ngobuchwepheshe, umuntu wangempela kufanele asethe i-akhawunti ye-Google + Lokhu kuletha inkinga lapho i-CEO yenkampani, omele abezomthetho, noma umnikazi kungenguye njalo olawula iziteshi zenhlalo. (bona iphuzu langaphambilini)
I-Google + Amakhasi ikhombisa imiphumela yenjini yokusesha (SERPs) kodwa engekho ezingeni kahle ngokusesha okungekho uphawu (okwamanje).
The uhlelo lokwazisa kuyahlekisa. Asikho isaziso esibonakalayo sokuthi othile uzibandakanye nekhasi lakho ngaphandle kokuthi uvule ikhasi lomkhiqizo. I-Google + ayithumeli ngisho izaziso ze-imeyili. Ibhokisi elibomvu le-Google bar libonisa kuphela izaziso zomuntu siqu zomlawuli.
Izungeza umkhiqizo nekhasi lomkhiqizo oliphethe kanye ne-akhawunti yakho ye-Google + idinga ukucabanga ngendlela eningi kakhulu.
Ngokufanayo, uzungeza uhlobo lomlawuli wakho kudinga ukuphambana kwedijithali. Futhi-ke awukwazi ukuzungeza i-akhawunti yakho ye-Google + ekhasini lakho lomkhiqizo uze uthole ukuthi ungazungeza kanjani ikhasi lakho lomkhiqizo kuqala. Udidekile okwamanje?
Ngingaqhubeka ngibuze ukuthi kungani kukhona into yemenyu Yamageyimu ekhasini lethu elinophawu lomkhiqizo, kodwa ngokuthembeka, lokho akunamthelela omncane esiphakamisweni senani lokwenza i-Google + Ikhasi; kumane kwenza i-nav ingasebenzeki kalula. Iphuzu lami ukuthi, kunikezwe ukuthi kukhona eminye imisebenzi yenani eliphakeme lokumaketha, mhlawumbe kufanele sikuyekele i-Google ikunikeze lokhu kancane.
Ngiphakamisa ukuthi amabhizinisi aqale aqinisekise ukuthi ayafuna futhi athuthukise amakhasi awo we-Google Place ngaphambi kokuzibandakanya namakhasi we-Google +. Ngiyazi ukuthi i-Google + yintsha, iyacwebezela, futhi ingaphenduka indlela enhle yokuxhumana namakhasimende, kodwa sekuvele kukhona irekhodi elide lezinzuzo ezihambisana nekhasi le-Google Place elungiselelwe kahle. Uma ungakaze ufune, noma ufuna ukuvuselela ikhasi lakho le-Google Place, yiya ku Izindawo zeGoogle.
Kakade i-Google Place yakho isiphumile? Ukukhetha kwami ​​kwesibili kuzoba ezinye izakhiwo zendawo ezifana ne-Yelp ne-Bing. Khumbula ukuthi uSiri, kuma-iPhone 4s amasha, usebenzisa i-Yelp. I-Bing inezinombolo ezikhethekile zokusesha umakhalekhukhwini, futhi njengoba imiphumela yokusesha ye-Yahoo ivela ku-Bing, lokho kubeka usesho lwe-BingHoo cishe kuma-30%. Ukwenza kube lula, vele uhambe ubambe lonke lolu hlu lwasendaweni ku- khOliKe.org.
Tags: indawo ye-googlegoogle plusikhasi lokuhlanganisa le-googleGoogle +seoSocial Media Marketing
Kevin Mullett Monday, November 14, 2011 Monday, October 26, 2020
UKevin ungunjiniyela wewebhu oqinisekisiwe, umakethi we-inthanethi, isikhulumi, i-blogger yezivakashi, kanye nomklami wokuwina umklomelo onolwazi olungaphezulu kweminyaka engu-13 lewebhu kanye namawebhusayithi angokwezifiso angama-300 kwisikweletu sakhe. UKevin usebenzisa iminyaka yakhe eyi-15 yokuthengisa nokuhlangenwe nakho kokumaketha kanye nentshisekelo yemithombo yezokuxhumana, ukwenza kahle izinjini zokusesha, ukuklama okuhle nokusebenziseka ukusiza amaklayenti eCirrus ABS aphumelele online.
Ukukhangisa nokubuyisa ekutshalweni kwemali
Isebenza kanjani i-Google Adwords Adrank?
Nov 14, 2011 ngo-2: 44 PM
Okuthunyelwe okuhle! Okuhlekisayo ukuthi namhlanje nje ngibonile ukuthi kukhona umuntu obeke ikhasi le- “Google Analytics” futhi ube negama likaGoogle kulo. Ukubhekisisa; kodwa-ke, kukhombisa ukuthi othile umane waduna umkhiqizo weGoogle. Kuyindida kakhulu! Futhi uyisimungulu iGoogle engazange ilayishe amakhasi ayo kuqala lapho iqala ukusebenza ngesici.
Nov 14, 2011 ngo-3: 58 PM
Ukhohlwe okukodwa, bangaxhumi kanjani izindawo kumakhasi emikhiqizo ye-G + okwamanje 🙂 Uthando getlisted.org (sibonga isiphakamiso sangaphambilini esivela kuwe)
Nov 14, 2011 ngo-8: 59 PM
Bekumele ngime kwenye indawo uChris. Ngishiye nokushiywa kwama-URL angenamsebenzi, umkhawulo wabantu abayizi-5000 / umkhawulo wombuthano womkhiqizo, kanye nenqwaba yabanye.
UWissam El Bahry
Mar 24, 2012 ku-12: 12 PM
uqinisekile nge-5000 ppl?! bengicabanga ukuthi u-facebook kuphela onawo lowo mkhawulo! ngiqinisekile!
Nov 14, 2011 ngo-4: 00 PM
Imicabango yami impela, uKevin! Ngenkathi ngijabule kakhulu ukusetha ikhasi lomkhiqizo le-G + le- Ibhulogi elenziwe ngokhuni, Bengingeke ngiphakamise ikhasi le-G + kunoma yimaphi amabhizinisi okwamanje (Njengoba ngingenalutho oluzolahleka ngaleyo bhulogi). Ngiyazi ukuthi ngihlala ngiyazisa iGoogle ngokunikeza ukufinyelela okunganqandeki kweminye imikhiqizo yabo ye-beta, kepha lokhu kuyi-beta encane kakhulu kunoma ngubani onengxenye ebukhoneni bakhe be-SM.
Nov 14, 2011 ngo-8: 06 PM
Ngiyabonga kakhulu ngalokhu okuthunyelwe uKevin! Ngaphandle kwakho angikwazi ukuhambisana nesikhulumi… wena ROCK.